အလုပ်ရှာသူများအတွက်လမ်းညွှန်ချက်များ | အလုပ်များ - အလုပ်ရှာဖွေရေးခရီးသွားဒူဘိုင်း၊ အာရပ်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စု
များအတွက်လမ်းညွှန်ချက်များ အာရပ်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စုထဲမှာအလုပ်ရှာဖွေသူများ။ ဒူဘိုင်းအတွက်အလိုရှိသောအလုပ်အကိုင်အဖို့မရှာဒီတိုင်းပြည်အသစ်ဖြစ်ကြသောသူတို့အဘို့လွယ်ကူသောအလုပ်တစ်ခုကိုဘယ်တော့မှဖြစ်ပါတယ်။ န်ထမ်းများ၏အစဉ်အလာနှင့် အလုပ်ရှင်များကိုကျနော်တို့မူလကပိုင်သည့်နိုင်ငံများနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါသလောက်ကွဲပြားခြားနားကြသည်.
ဒူဘိုင်းအမြန်ဆုံး-ကြီးထွားလာမြို့နှင့်အလုပ်ရှာဖွေသူများဖြစ်ပါသည် သူတို့ပြိုင်ဘက်ထောင်ပေါင်းများစွာ၏ယှဉ်ပြိုင်ချင်တယ်ဆိုရင်သူတို့ရဲ့ခြေအိတ်ဆွဲရမည်ဖြစ်သည်။ အဘယ်သို့ငါကြည့်ရှုလေ့လာကြသည်ပါပြီ အလုပ်သစ်ရှာဖွေသူများ၏ကြည့်ရှုကိုယ်ရေးရာဇဝင်စဉ်အတွင်း သူတို့လျော့နည်း application ကိုရရှိသွားတဲ့သူအလုပ်ရှင်က thru ငှါအဘယ်အရပ်ကိုယ်ရေးရာဇဝင်၏အဟောင်းပုံစံ, မဟုတ်ရင်ငါမခံစားရဘူးမွေးစားခဲ့ကြ အလုပ်ရှင်များ အဆိုပါခေတ်မမီတော့ခြင်းနှင့်ဆီလျှော်ကိုယ်ရေးရာဇဝင် thru သွားအပေါ်သူတို့ရဲ့အချိန်ဖြုန်းပါလိမ့်မယ်။
အလုပ်ရှာဖွေသူများ၏အများစုအမြဲဘုံတဦးတည်းရှိခဲ့ ပြန်စသည် သူတို့ဆိုလစ်လပ်ရာထူးကိုရှာတွေ့နေရာတိုင်းမှာနှင့်အနေအထားကိုအများစုကသူတို့ဆန့်ကျင်လုံးဝများမှာပင်, မည်သည့်အလုပ်အကိုင်အဖို့အတူတူပဲ paste လုပ်လိုက်ပါ အရည်အချင်းများနှင့်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်အတွေ့အကြုံများ.
တစ်ခုမှာတစ်ဦးကိုအတင်းမနိုင် မိမိအအတွေ့အကြုံများနှင့်အကြံပြုချက်များချမှတ်ရန်အလုပ်ရှာဖွေသူ, ဒါပေမယ့်သူ / သူမအချို့အသီးအနှံများအကြံပြုချက်များသူတို့ရဲ့သမိုင်းမှတ်တိုင်များအောင်မြင်ရန်ရပေမည်။
တစ်အဆောက်အဦ Manager ကဖြစ်ခြင်းများနှင့်ငါသည်ဝမ်းမြောက်လိမ့်မည်ငါ၏အယခင်အတွေ့အကြုံများအပေါ် အခြေခံ. အလုပ်ရှာဖွေသူများနဲ့ငါ့အကြံပြုချက်မျှဝေဖို့, ငါကသူတို့ကိုအလုပ်ရှင်နှင့်နီးစပ်သောရရှိရန်ကူညီပေးပါမည်မျှော်လင့်ပါတယ်။
သင်၏ယခင်အတွေ့အကြုံများ Set နှင့် အရည်အချင်းများ တစ်ဦးအခြေခံအဖြစ်နှင့်လုံးဝသင့်ရဲ့ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးအနက်ကိုဘော်ပြခြင်းနှင့် သင့်ရဲ့အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းရည်ရွယ်ချက်များသတ်မှတ်, သငျသညျ 10 နှစ်ကြာကိုယ့်ကိုကိုယ်မြင်ချင်ဘယ်မှာပါ။ သငျသညျကိုယူပြီးနေကြသည်ရင်တောင် တစ်ဦးအရောင်းစာရေးအဖြစ်စတင်ပါ သင်တစ်ဦးဂုဏ်သိက္ခာရှိတဲ့ကုမ္ပဏီအတွက်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုအရောင်းဌာနမှူးမျှော်လင့်ဖို့မျှော်လင့်ရပါမည်။ သူတို့သာတစ်ဦးချင်းစီမှသာမိမိတို့၏အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းသမိုင်းမှတ်တိုင်များအောင်မြင်ရန်နိုင်ပါတယ် သူတို့တစ်တွေသတ်မှတ်ထားအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းရည်ရွယ်ချက်ရှိပါက.
စက်မှုလုပ်ငန်းရှာကြံသင့်ရဲ့အလုပ်ဦးစားပေးသိမ်းဆည်းထားပါ, သငျသညျတှငျသငျ့အနာဂတ်တည်ဆောက်ချင်တဲ့စက်မှုလုပ်ငန်းမှအလုပ်အဘို့အစဉ်အမြဲရှာဖွေ။ အလုပ်အကိုင်အစိတ်ကျေနပ်မှုအလွန်ကိစ္စရပ်များတစ်ခုတောက်ပအနာဂတ်ရှာနေလျှင်။ တဦးတည်းသာရှိရာသူ / သူမအလုပ်ကျော် command ကိုရှိနိုင်ပါသည် အလုပ်အကိုင်အစိတ်ကျေနပ်မှုနှင့်တွေ့ဆုံ.
မကြာခဏတွေ့ကြံ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းကျွမ်းကျင်သူများက သင်၏မိတ်ဆွေများ & မိသားစုများအတွက်နဲ့သူတို့ရဲ့ကျွမ်းကျင်သူထင်မြင်ယူဆရပါတယ်။ သင့်ရဲ့ပစပ်ဟခွဲခြားစိတ်ဖြာသိမ်းဆည်းထားပါနှင့် အကြံဥာဏ်စိတ်ရင်း-bits နှင့်အတူကွာဟချက်ဖြည့်ပါ။
Kingston Stanley လစာစစ်တမ်း 2019 Download
Kingston Stanley လစာစစ်တမ်း 2019 Downloadဒေါင်းလုပ်
တစ်ဦး pin ကိုတစ်စက်တိတ်ဆိတ်စွာထိုင်ခြင်းနှင့်ပေး မည်သည့်အလုပ်မလျှောက်ထားမီ 100% အာရုံစူးစိုက်မှုကို & အာရုံစူးစိုက်မှု။ ၎င်း၏အွန်လိုင်းမှလျှောက်လွှာများနှင့်အသုံးချအလုပ်အကိုင်အသင်တို့၏ခြေကိုနမ်းပါလိမ့်မယ် drop လိုဘူး။ တဦးတည်းသာပဏာမနိုင်ပါတယ်သို့မဟုတ် အင်တာဗျူးအဘို့ကိုခေါ်ခံရဖို့ သူ / သူမအနေနဲ့အလုပ်ရှင်၏လိုအပ်ချက်နားလည်နိုင်သည်နှင့်အညီလျှောက်ထားလျှင်။
နေ့စဉ်အလုပ်အကိုင်အပလီကေးရှင်းတစ်ခုနှင့်ကန့်သတ် Set ငါပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရလို 10 အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း-related အလုပ်အကိုင်များလျှောက်ထားကြောင်းအကြံပြုနှင့်အကြံပြု လွယ်ကူသောဆီလျှော်နဲ့ web အလုပ်တွင်ကျယ်စွာအပေါ်အလုပ်အကိုင်များများ၏လိုအပ်ချက်သို့ရတဲ့မပါဘဲ 100 လျှောက်ထားထက်ဝေးပိုကောင်းဖြစ်ကြသည်။ ကျွန်မမျက်မြင် ယောဘသည်ရှာဖွေနေသူများအများစုသာလျှောက်ထားအွန်လိုင်းလွယ်ကူသောအလုပ်လျှောက်ထားခြင်း။
အွန်လိုင်းအလုပ် applications များ:
အပြင်အချိန်ကနေ ဤသည်နေ့ရက်ကာလသည်အလွန်ခက်ခဲကြောင့်ဖြစ်လာမယ့်အလုပ်လျှောက်ထားနေစဉ်အတွင်းငွေစု ကြော်ငြာအနည်းငယ်အလုပ်လျှောက်ထားသူရာပေါင်းများစွာအကြားပဏာမခံရဖို့။ ထိုလုလင်သည်အစဉ်အဆက်အများစုမှာနှင့် အလုပ်သစ်ရှာဖွေသူများသာအွန်လိုင်း Web Portal ခိုလှုံပါ၏။ ကျွန်မပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရသူများဖြစ်ကြ၏ရှိရာစက်မှုလုပ်ငန်းများအမဲလိုက်အကြံပြုမယ်လို့ အလုပ်တစ်ခုရဖို့နဲ့သူတို့ရဲ့ website တွင်လစ်လပ်ရာထူးတွေ့ရှိရန်စိတ်ဝင်စား။ သူတို့ရဲ့ website ကနေလျှောက်ထားခြင်းနှိုင်းယှဉ်အများကြီးပိုကောင်းနှိုင်းယှဉ်ကဲ့သို့ဖြစ်၏ အွန်လိုင်းအလုပ်ပေါ်တယ်မှ.
ကံကောင်းထောက်မစွာရှိလျှင်, တစ်ခုလျှောက်ထားသူတစ်ဦးထမ်းရှာဖွေသူများထံမှတုံ့ပြန်ချက်ရရှိသွားတဲ့ သူတို့တကယ်မတည်ရှိပါလျှင်ခိုင်လုံသောအကြောင်းပြချက်နဲ့သူ့ရဲ့ application ကို၏ငြင်းပယ်ခံရအတွက်သူ / သူမသည်ကွာဟချက်ဖြည့်ဆည်းရပါမည်။
မှခွဲပြီး အလုပ်ရှာဖွေသူများအတွက်အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းကွာဟချက်, ကျွန်မတိုကြိုတင်မှာကြားထားအောက်တွင်ဖော်ပြထားသောအတွက်ဆကျဆံသူကိုကွဲပြားခြားနားသောကုမ္ပဏီများအွန်လိုင်းအလုပ် Portal နှင့်ရှာဖွေစုဆောင်းအပေါ်အချို့သောအပြုသဘောဝေဖန်မှုများရှိလုပ်ပါ။
ငါလွယ်ကူသောတစ်အဖျားအတွက်ဘယ်တော့မှဖြစ်ကြောင်းကို အလုပ်အကိုင်အခွင့်အများအတွက်လျှောက်လွှာလုပ်ထုံးလုပ်နည်းဒါကြောင့်လည်းထိုက်တန်လျှောက်ထား application ကိုတစ်ခါတစ်ရံတွင်ပြန်လည်သုံးသပ်ဘယ်တော့မှဘယ်မှာမလိုချင်တဲ့ & မသင့်လျော်လျှောက်ထား၏ရာပေါင်းများစွာကြိုဆိုသည်။ ကျွန်မပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရရှိသင့်ပါတယ်အကြံပြုမယ်လို့ တစ်ဦး Pre-အင်တာဗျူးလုပ်ထုံးလုပ်နည်းသို့မဟုတ်ဆက်နွယ်အလုပ်အကိုင် questionnaire နှင့်သာအစစ်အမှန်နှင့်ထိုက်တန်လျှောက်ထားဖမ်းပါလိမ့်မယ်။
အကောင်အထည်ဖော်ရကြလိမ့်မည်အလုပ်တစ်ခု "လိုအပ်ချက်များကို filter ကို" ရန်လျှောက်ထားခြင်းမပြုမီအဖြစ်အတူတူ, ပညာရှိပွီးအစစ်အမှန်အလုပ်ရှာဖွေသူတစ်ခုသာအလုပ်လျှောက်ထားပါလိမ့်မယ်ဘယ်မှာ သူ / သူမတည်ကိုက်ညီခံစားရရှိရာ။ ဒုတိယအသာစိတ်ဝင်စားခြင်းနှင့်အမှန်တကယ်လျှောက်ထား-အင်တာဗျူးများ pre ဖို့အချိန်ပေးပါ။
ဒူဘိုင်း, ယူအေအီးအတွက်အကောင်းဆုံးဂျော့ဘ်ပေါ်တယ်အဘို့အောက်တွင် Click
အလုပ်ရှင်များ & ရှာဖွေစုဆောင်းရာမှ no-တုံ့ပြန်ချက်:
ငါအများဆုံးကြည့်ရှုလေ့လာခဲ့ကြသောအရာကိုဤသည်နေ့ရက်ကာလ အလုပ်ရှင် & ရှာဖွေစုဆောင်း '' ကုမ္ပဏီ "သင်၏လျှောက်လွှာများအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်, ငါတို့သည်သင်တို့၏လျှောက်လွှာကိုပြန်လည်သုံးသပ်မည်ကျောကိုသင်ရလိမ့်မယ်", ဒါပေမဲ့သူတို့ပြန်ရတော့မှတဦးတည်းဘုံ AUTO ကိုအီးမေးလ်နှင့်အတူသာပြန်ဖြေတယ်။ အတိတ်တွင်အလုပ်လက်မဲ့ဖြစ်ခြင်းငါသည်ဤအတွေ့အကြုံကိုခဲ့ ငါအရှိဆုံးသက်ဆိုင်ရာအလုပ်အကိုင်လျှောက်ထားခဲ့ပေမယ့်ငါကနေတစ်ခုတည်းသတင်းစကားကိုလက်ခံရရှိဖူးဘူးကြောင်း အလုပ်ရှင်များ ငါ၏အလျှောက်လွှာငြင်းဆန်ခဲ့သည်ခံခဲ့ရသည်ခိုင်လုံသောအကြောင်းပြချက်နှင့်အတူ။
ဒါဟာငါ့အနှိမ့်ချမယ့် လျှောက်ထားသူပြန်ပြောင်းဖို့အားလုံးကိုအလုပ်ရှင်များမှတောင်းဆိုချက်အရ သူမ၏လျှောက်လွှာငြင်းဆန်ခဲ့သည်ခံခဲ့ရသူ / သင်၏စိတ်ရင်းအကြောင်းပြချက်ခိုင်လုံသောအကြောင်းပြချက်နှင့်အတူတဦးတည်းတစ်ခုတည်းဝါကျနှင့်အတူ ငြင်းဆန်၏အတူလျှောက်ထားသူကလှုံ့ဆျော နည်းလမ်းနှစ်ခုအတွက်, ဆိုလိုသည်မှာတစ်ဦးက (1) ကိုလျှောက်ထားသူသည်မိမိအပလီကေးရှင်းများနှင့်ဒုတိယအလျှောက်ထားနေစဉ်အတွင်းသုံးစွဲအချိန်ကိုနှမြောခံစားမိတော့မှပါလိမ့်မယ် လိုအပ်ရှိရာသူ / သူမ၏စွမ်းရည်ကိုတည်ဆောက်မယ့်အခွင့်အလမ်းရလိမ့်မယ်။
ငါတစ်ခုတည်းစုံစမ်းမှုရှိသည်နှင့်ငါက၎င်း၏ပြန်ကြားချက် "လျော်ကြေးများနှင့်အကျိုးခံစားခွင့်ရနိုင်ပါလျှင်ကျွန်မအလွန်ကျေးဇူးတင်ပါလိမ့်မည်ဖြစ်ကြောင်း တစ်ခုလျှောက်ထား၏ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ကျွမ်းကျင်မှုအပေါ်အခြေခံပြီး အပိုင်သို့မဟုတ်ရုံသူ / သူမ၏ နိုင်ငံသားကိစ္စရပ်များ?"
Sheraz Shah က
ဒူဘိုင်းမြို့ကုမ္ပဏီယခုဒူဘိုင်းမှာရှိတဲ့ဂျော့ဘ်များအတွက်ကောင်းသောလမ်းညွှန်ပေး။ ကျွန်ုပ်တို့၏အဖွဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အဘို့အသီးအသီးဘာသာစကားကိုသတင်းအချက်အလက်ကိုထည့်သွင်းဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါတယ် ဒူဘိုင်းလမ်းညွှန်များအတွက်ဂျော့ဘ်။ ဒါကြောင့်စိတ်ကို၌ဤအတူ သငျသညျယခုအာရပ်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စုအတွက်လမ်းပြသောအကြံပေးချက်များနှင့်အလုပ်အကိုင်အခွင့်ရနိုင် သင့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ဘာသာစကားနှင့်အတူ။